IEksodus 18 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 UYitro, umbingeleli wakwaMidiyan, uyise womkaMoses, wayiva yonke into uThixouThixo abeyenzele uMoses, namaSirayeli abantu bakhe, ukuba uYehova uwakhuphile amaSirayeli eYiputa.
3 noonyana bakhe bobabinibobabini; igamaigama lomnye lalinguGershom, kuba wathi, Bendingumphambukeli ezweni lolunye uhlanga; igamaigama lomnye lalinguEliyezere,
4 kuba wathi, UThixoUThixo kabawo ubengumncedi wam, wandihlangula ekreleni likaFaro.
5 UYitro, uyise womkaMoses, wezaweza ke noonyana bakhe nomkakhe, kuMoses entlango, apho wayemise khona intente, entabeni kaThixo.
6 Wathi kuMoses, Mna Yitro, unguyihlo, ndize kuwe, ndinomkakho enoonyana bakhe bobabinibobabini.
7 Waphuma uMoses, waya kumkhawulela uyise womkakhe, waqubudawaqubuda, wamanga; babuzana impilo, bangena ententeni.
8 UMoses wambalisela uyise womkakhe yonke into uYehova abeyenzile kuFaro nakumaYiputa ngenxa kaSirayeli; nenkxamleko yonke abayifumanayo endleleni, nokuhlangulwa kwabo nguYehovanguYehova.
10 Wathi uYitro, Makabongwe uYehova owanihlangulayo esandleni samaYiputa, nasesandleni sikaDaro; owabahlangulayo abantu, baphuma phantsiphantsi kwesandla samaYiputa.
11 Ngoku ndiyazi ukuba uYehova mkhulumkhulu koothixo bonke; ewe, kwakuloo nto amaYiputa abewakhukhumalele ngayo amaSirayeli.
12 UYitro, uyise womkaMoses, wamthabathela uThixouThixo idini elinyukayo nemibingelelo; wezaweza uAron namadoda amakhulu onke akwaSirayeli, esiza kudla isonkaisonka noyise womkaMoses phambi koThixo.
13 Kwathi ngengomso, uMoses wahlala wathetha amatyala abantu; abantu baxhontela kuMoses, kususela kusasakusasa kwada kwangokuhlwa.
14 Wayibona uyise womkaMoses yonke into abeyenza ebantwini, wathi, Iyintoni na le nto uyenzayo ebantwini? Kungani na, le nto uhlalauhlala wedwa, bathi bona bonke abantu baxhontele kuwe, kususela kusasakusasa kude kuhlwe?
19 Phulaphula ngoko izwi lam, ndikuphe iqhinga; uThixouThixo woba nawe. Wena yiba ngumlomo wabantu kuThixo, uzise izinto zabo kuThixo;
20 ubafundise imimiselo nemiyalelo, ubazise indlelaindlela abaya kuhamba ngayo, nomsebenzi abaya kuwenza.
21 Uze uzikhangelele ebantwini bonke amadoda anobunkunkqele ekuthetheni amatyala, amoyikayo uThixouThixo, amadoda anyanisileyo, ayithiyileyo inzuzoinzuzo embi, uwamise phezu kwabo, abe ngabathetheli-waka, nabathetheli-khulu, nabathetheli bamashumi ngamahlanu, nabathetheli bamashumi ngamanye;
23 Ukuba uthe wayenza loo nto, waza wakuwisela umthethoumthetho uThixouThixo, woba nako ukuma, bathi naba bantu bonke bafike endaweni yabo benoxolo.
25 UMoses wanyula amadoda anobunkunkqele ekuthetheni amatyala kuwo onke amaSirayeli, wawenza iintlokoiintloko phezu kwabantu, aba ngabathetheli-waka, nabathetheli-khulu, nabathetheli bamashumi ngamahlanu, nabathetheli bamashumi ngamanye.
Exploring the Meaning of IEksodus 18
IGenesis 26:30, 43:27
IEksodus 2:15, 16, 21, 22, 25, 3:1, 4:20, 10:28, 15:11, 17:9, 23:23
ILevitikus 24:11, 12
Amanani 10:30, 11:14, 17, 15:33, 34, 27:2, 33:4
IDuteronomi 1:9, 13, 15, 17, 5:27, 16:18, 17:9
Abagwebi 1:1, 16
1 Samuweli 17:18, 22
2 Samuweli 11:7, 18:1
EyokuQala yeziKronike 23:15, 29:22
2 yeziKronike 19:7, 10
UNehemiya 2, 9:10
IiNdumiso 78:53, 95:3, 97:9, 106:8
UIsaya 44:22, 23
Izenzo zaBapostile 7:29